U-Pallo Zweledinga Jordan wazalwa nge-22 kaMeyi ngo-1942 e-B Indawo, e-Kroonstad, e-Orange Free State. Utata wakhe, uGqr Archibald Campbell Jordan, wayengumntu wasenoveli, eyunivesithi kunye nezemfundo kwaye umama wakhe, uGqirha Priscilla Phyllis Jordan (wazalwa, uNtantala), wayengutitshala, umphandi kunye nomhlohli. Bobabini abazali bakhe babengamalungu asebenzayo e-Un-European Unity Movement (NEUM). Usapho lakwaJordane lwalupolitika kakhulu kwaye ulandela emanyathelweni abo. Waqala eneminyaka esixhenxe ngokuthengisa iikopi zeTorch, iphephandaba eliveliswa yi-NEUM. Wayengumfundi okhutheleyo. Ukugqiba kwakhe ukufunda, waya kwiiyunivesithi ezahlukeneyo eMzantsi Afrika, eMelika naseMelika. Walishiya ilizwe ngo-1962 esiya kufunda kwiDyunivesithi yaseWisconsin e-U.S. Uye wafumana izidanga ezininzi kubandakanya nesidanga sokuthweswa isidanga kwisikolo seLondon Economics.
UJordani wabhala amanqaku amaninzi abalulekileyo. Umgangatho womsebenzi wakhe wophando ubonakaliswa kumaphepha akhe apapashiweyo. Oku kubandakanya, phakathi kwabanye, Ukuphengululwa kukaMoses Kotane: Uhlaziyo lwase-Afrika (1974); Ukuvukelwa kweSoweto: Uhlalutyo (1976) kunye neAfrican Petit Bourgeoisie: Uhlolisiso lwe-NAFCOC (1984) .Phakathi kowe-1985 nokubuyela kwakhe eMzantsi Afrika phakathi konyaka we-1990, uJordani wakhokela iqela labaphandi be-ANC kunye nabaphengululi bamazwe aphesheya iinkomfa kunye neesemina eZimbabwe, eTanzania, e-USA, eBritane nakwi-USSR ngelo xesha. Ngo-1985, wanyulwa ukuba azokusebenza kwiKomiti yokuLungiselela yeSizwe ye-ANC, eyayilungiselela inkomfa yayo enkulu yomgaqo-nkqubo e-Kwabe, eBotswana. Kule nkomfa uJordan wanyulwa kwiKomiti eLawulayo ye-ANC. Ukusukela ngo-1985 ukuya kowe-1989 wasebenza kwiKomiti yesiCwangciso se-NEC kunye neeKomiti zobuGcisa njengeConveno.
Iphepha elinomgaqo-nkqubo we-Afrika eseMazantsi e-Soviet Union-eneSpecial Reference eMzantsi Afrika: Amanye amaNqaku (ka-1990) aphawula ukuhamba okuhlaziyayo komfundi we-ANC kuhlolisiso lwayo olunobuzaza lomgaqo-nkqubo waseSoviet kwicala lasekhohlo. Ngo-1990 wangena kwingxoxo-mpikiswano ende malungaIphepha elinomgaqo-nkqubo we-Afrika eseMazantsi e-Soviet Union-eneSpecial Reference eMzantsi Afrika: Amanye amaNqaku (ka-1990) aphawula ukuhamba okuhlaziyayo komfundi we-ANC kuhlolisiso lwayo olunobuzaza lomgaqo-nkqubo waseSoviet kwicala lasekhohlo. Ngo-1990 wangena kwingxoxo-mpikiswano ende malungaIsimo seSoviet Union ngusihlalo weQela lamaKomanisi oMzantsi Afrika, uJoe Slovo, kwinqaku elinomxholo othi The Callen of Conscience kwi-SACP - Uhlalutyo olugqibeleleyo lweSlovo 'Ngaba ubuSoshiyali busilele?' Ukubonakalisa ukwahluka kwezimvo kulungelelwaniso kathathu.Emva kwexesha wathatha umba kunye neSlovo kwakhona kwicala lesikhokelo senkqubo yothethathethwano ngo-1993. Emva kwesibhengezo esingalindelekanga nguMongameli welizwe u-F.W. de Klerk wokukhulula i-ANC kunye neminye imibutho yenkululeko, uJordani wabuyela elizweni ngo-Juni ka-1990.Ngo-1991, wakwazi ukugcina isikhundla sakhe se-NEC kwiNkomfa yeSizwe yokuqala yokubonisana kwi-ANC kweli lizwe kwiminyaka engamashumi amathathu. Waba ngumntu owaziwayo kumabonwakude wase Mzantsi-Afrika njengesithethi se-ANC kwezona zithethi zaphambili nangaphakathi kunyulo luka-1994.
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pallo_Jordan&oldid=54137"
This page was last edited on 6 uMfumfu 2019, at 12:37.